Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo » IRashiya ifuna iLas Vegas yayo eSochi
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Isochi Casino kunye nesakhiwo seeholide kwindawo yoNgcakazo eKrasnaya Polyana, eSochi, eRashiya
Indawo yaseRussia i-Krasnaya Polyana yokungcakaza iya kuhlengahlengiswa ukuze ikhuphisane nezona ndawo zinkulu zokuzonwabisa zamanye amazwe.
Indawo yaseRussia iKrasnaya Polyana yokuziqhelanisa nemodeli yeshishini laseLas Vegas ngowama-2026.
Abaphuhlisi baceba ukuyilungisa indawo yokubhenela ukuze bajolise kwezona njongo ziphambili kwiinkonzo zokuzonwabisa kunokungcakaza.
Indawo yokungcakaza yase Krasnaya Polyana okwangoku imelwe ngamaziko amathathu ongcakazo.
I-Krasnaya Polyana yindawo edumileyo yokutyibilika ekhephini kunye nebhodi ekhenketha kwisixeko esisemazantsi eRashiya Sochi enegama lokuba ngowona "uhloniphekileyo" eRashiya. Ikwadume ngendawo yokungcakaza eyadalwa ngo-Agasti 2016.
Indawo yokungcakaza yase Krasnaya Polyana okwangoku imelwe ngamaziko amathathu ongcakazo: IKhasino yaseSochi, Iholo lomatshini wokubeka ibhonasi, kunye neBoomerang Casino. Indawo yokungcakaza ikwabandakanya indawo yemidlalo yeqonga, ihotele yeBhonus, iivenkile zokutyela ezininzi, kunye neWow Arena yemidlalo kunye nendawo yolonwabo.
Okwangoku, iziseko zedolophu yaseKrasnaya Polyana ziyaphuhliswa kwaye zandisiwe ukuze zilungelelaniswe nemodeli yeshishini laseLas Vegas ngowama-2026.
“Izicwangciso-qhinga zigubungela ukuphuculwa kwezixhobo kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide. Kule minyaka mihlanu izayo, sizokwandisa kwaye silungelelanise iziseko zophuhliso zommandla wokungcakaza waseKrasnaya Polyana kwimodeli yeshishini lokuzonwabisa eLas Vegas, ”utshilo uDmitry Anfinogenov, intloko yophuhliso lweprojekthi.
Abaphuhlisi baceba ukuqala ngokwandisa iBoomerang Casino esele ikhona, ukuseka iholo elitsha lomatshini wokulungiselela kunye nokulungiselela ukwamkelwa simahla kwindawo yokutyela yaseBrunello. Ukuvulwa okukhulu kwendawo yokutyela eRosa Khutor ikw ajenda ye-2021-22.
Umsebenzi wokuhlaziya kwihotele iBhonus uyaqhubeka ngoku, namagumbi ongezelelweyo kwiinyanga ezizayo. Indawo yezemidlalo kunye nokuzonwabisa yeWow Arena nayo iya kulungiswa ekwindla, ngelixa iholo yemidlalo esele ivuliwe kumgangatho wesibini weSochi Casino.
Abaphuhlisi baceba ukuyilungisa indawo yokubhenela ukuze bajolise kwezona njongo ziphambili kwiinkonzo zokuzonwabisa kunokungcakaza. Nangona kunjalo, bathi indawo yokungcakaza iya kuhlengahlengiswa ukuze ikhuphisane nezona ndawo zinkulu zokuzonwabisa zamanye amazwe.
Oko kuvulwa ngo-2016, indawo yokungcakaza yaseKrasnaya Polyana kwi Sochi ityelelwe ngabantu abangaphezulu kwezigidi ezi-2 abavela kumazwe ali-155. Ngo-2018, Ikhasino Sochi uphumelele ibhaso lobomi kunye neshishini njengeyona projekthi yezolonwabo yaseRussia.